Xarunta Talo Bixinta La-talinta Wanaagsan waxay bixisaa umeerin hal-hal ah oo ku saabsan akhriska, farshaxanka luqadda, xisaabta, iyo cilmiga bulshada / muwaadinimada. Tan waxaa ka mid ah hufnaanta hadalka iyo qoraalka, ereyada oo la hagaajiyay, faham weyn, xirfadaha aasaasiga ah ee xisaabta, iyo u diyaargarowga imtixaanka waddaniyadda. Marka lagu daro carruurta iyo dhalinyarada, in badan oo ka mid ah Dadka waaweyn ee Barta Luqadda Ingiriisiga ayaa wax lagu baraa Xarunta Waxbarashada.
Barnaamijka Gaarsiinta Qaxootiga
Badalida Nolosha. . . Hal Haweeney Markasta
Barnaamijka Gaarsiinta Qaxootiga, oo lagu kordhinayo Xarunta Talo Bixinta Talada Wanaagsan, waxaa bilaabay 2012 walaasheed Elise Silvestri. Tababarayaal iskaa wax u qabso ah ayaa ku bixiya luqadda Ingiriisiga guriga gudihiisa iyo xirfadaha nololeed ee wax ku oolka ah haweenka qaxootiga ah ee aan awoodin inay ka qayb galaan xiisadaha sababo la xiriira gaadiid la'aan ama daryeel la'aanta xubnaha qoyska. Inta badan bartayaasha luuqada ee u adeegaya Barnaamijka Fidinta Qaxootiga waa Itoobiyaan, Soomaali, iyo Koonfurta Suudaan.
Sannadkii 2020, Cimarron Burt ayaa la wareegay barnaamijka. Isu duwaha Barnaamijka Fidinta Qaxootiga, Cimarron wuxuu qortaa, jadwal u sameeyaa, wuxuuna tababbaraa macallimiin, marka lagu daro waxbarista Xarunta Talo Bixinta Talada Wanaagsan.
Marwalba waxaa loobaahanyahay mutadawiciin, khaasatan maadaama macalimiin khibrad hore wax u dhigaa ay aad usii yaraanayaan Nasiib wanaagse, ardayda kuleejka ah ee Jaamacadda Minnesota - Mankato, Bethany Lutheran, iyo South Central College waxay bilaabeen inay muujiyaan xiisaha tabaruca barnaamijka.
Ku deeqo Hada!
Saaxiibada Xarunta Talo Bixinta Talada Wanaagsan waxay wadaagaan sheekooyinkooda!
Darlette Hoppe, Hooyada saddex carruur ah
Waxaan ka faa'iideysanay Xarunta Wax Barashada ee Talada Wanaagsan sanado badan mana aanan ku qanacsaneyn. Waxbarista aan la kala qaadin waxaa lagu bixiyaa qaab hal abuur leh oo xoojinaya ka dibna ku sii dhisaya baahida ilmo kasta. Kaqaybqaadashada barnaamijkan waxay kordhisay kalsoonida carruurteenna iyo waxqabadka tacliimeed ee dugsiga. Waxaan jecel nahay Xarunta Wax Barashada iyo wanaagii aan halkaa ku helnay oo dhan.
Lindsay Solheid, Jaamacadda Marquette
Dhamaadka dhamaadka fasalka koowaad waxaan bilaabay inaan aado Xarunta Waxbarshada si caawimaad dheeraad ah looga siiyo waxbarashadayda. Intii ay halkaa joogtay, Walaasheed Lucille waxay u kuur gashay wax aan sax ahayn sida aan u shaqeynayo erayga qoran, waxayna ii soo jeedisay in laygu imtixaamo cillad xagga akhriska / aragga ah. Waxaa laga ogaaday baaritaankaan in labada indhoodba aysan wax u aqrinin si wadar ah, halkii ay ku farsameyn lahaayeen erayga qoran laba qaab oo kala duwan. Iyada oo loo marayo Walaasheed Lucille waxaan ka helnay Daaweynta MN Vision. Kadib markaan indhahayga dib ugusoo qaatay daaweynta oo aan usii waday Xarunta Wax Barashada, waxaan awooday inaan ku soo laabto wadada saxda ah oo aan la qabsado heerka darajadayda. Daryeelka cajiibka ah iyo waxbarista awgeed ee Dugsiyada Walaalaha ah ee Notre Dame iyo Xarunta Wax Barashada, ma joogi doono halka aan maanta joogo, oo ah fasalka koowaad ee Jaamacadda Marquette!
Waxaan ka soo qayb galay Xarunta anigoo 26 jir ah oo aan akhriste ahayn 70meeyadii. Waxay u ahayd waayo-aragnimo nolosha beddelaysa aniga iyo qoyskayga. Waan aqrin karay menus, waxna u aadi karaa, waxna waan u aqrin karaa wiilasheyda
Wiilkaygu wuxuu ku talaabsaday horumar layaableh xaga aqriska iyo xisaabta waxayna ka caawisay dhisida isku kalsoonidiisa. Waxaan Xarunta kula talinayaa waalid kasta oo carruurtiisu u baahan tahay caawimaad. (Kaqeyb galay fasalada hoose iyo dhexe.)
Wixii macluumaad dheeraad ah wac 507-389-4260
Wax badan ka baro Xarunta Wax-barashada La-talinta Wanaagsan!
Macluumaadka ku saabsan umeerin hal-hal ah oo loogu talagalay carruurta, dhalinyarada, iyo dadka waaweyn, fadlan buuxi oo soo gudbi foomka soo socda.